Toamasina : terena hanorenana lycée ny tany manan-tompo | NewsMada
Toamasina : terena hanorenana lycée ny tany manan-tompo
Misy toerana midadasika iray any Toamasina, nambaran’ny Jirama fa tsy azo onenana sy anorenan-trano, nanomboka ny taona 2009 satria mampidi-doza, mety hipariahan’ny herinaratra. Mikasa hanorina fotodrafitrasa lehibe mamokatra herinaratra avy amin’ny masoandro (photovoltaiques) ny fanjakana miaraka amin’ny mpiara-miombon’antoka. Tetikasa anisan’ny goavana indrindra any an-toerana, ataon’ny mpampiasa vola vahiny amin’ny famokarana herinaratra sady mora vidy.
Tompon’ity tany ity ny orinasa Filatex, ka nomena fe-potoana 15 andro hiala eo amin’ny toerana ireo olona monina sy manorina tsy ara-dalàna trano, efa ho dimy taona izao.
Tsy mahafantatra ny minisitra
Ny mahavariana anefa, nikarakara lanonana, nametrahana vatofototra voalohany, hananganana sekoly lycée, ny tompon’andraikitra eo an-toerana. Voalaza fa tsy mahafantatra akory ny fisian’izany ny foibe sy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena.
Nisy fotoana efa nisedra olana tamin’ny mpibodo tany ny Filatex. Voavaha ny olana rehefa nomena tany sy nafindra toerana izy ireo, saingy misy andiany faharoa indray izao mihevitra ny hanao toy izany ihany. Nitarika ity lanonana fametrahana vatofototra eo amin’ny tanin’ny olon-tsotra, misy titra sy vita baorina, ity ny talem-paritry ny Fanabeazam-pirenena any Toamasina.